Shirkii Golaha Wasiiradda Puntland oo looga hadlay Arrimo kala duwan – Radio Daljir
Luulyo 19, 2018 5:41 g 0
Shirkii Golaha Xukuumadda Dawladda Puntland oo uu Shir-Guddoominayay Madaxweyne Ku-xigeenka Dawladda Puntland Eng: Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey, ayaa looga hadlay arrimaha kala ah Amniga dalka, Xeerka Cilmiga Baarista Danbiyada Iyo Warbixino kale.
Golaha Xukuumada Dawladda Puntland oo warbixin ka dhagaystay Wasaaradda Amniga ayaa sheegay in guud ahaan dalku xasiloon yahay, waxayna golahu bogaadiyeen howl galada Amniga ee dalka kasocda iyo feejignaanta ciidamada qalabka sida.
Sidoo kale Golaha Xukuumada Dowladda Puntland oo ku dheeraday Amniga dalka ayaa sheegay sida kucad dastuurka inay Dowladdu difaacayso isla markaana xoreynayso guud ahaan xuduudaha dastuuriga ah.
Xeerka Cilmiga Baarista Danbiyada.
Golaha xukuumadda Dowlada Puntland ayaa loo qeybiyey xeerka cilmiga baarista danbiyada ,waxaana soo diyaariyey Hay’adda Cilmiga Baarista Danbiyada.
Xeerkaan oo dalku baahiweyn u qabo ayaa qeexaya habka cadeynta danbiilaha dahsoon, maaddada la adeegsaday, goobta iyo goorta ayey golahu si qoto dheer uga doodeen waxaana loo balamay kulanka xiga ee golaha xukuumadda in lagu meel mariyo.
Golaha Xukuumadda Dawladda Puntland ayaa warbixin ka dhagaystay Wasaaradda Kaluumeysiga iyo Kheyraadka Baddaha oo ka warbixisay safarkii Wasaaraddaha Kaluumeysiga ee xubnaha ka ah Federalka.